रुकुम घटनामा भेरी नदीमा हराइरहेकामध्ये एक युवाको शव चार दिनपछि नदीमा तैरिएको अवस्थामा फेला पारे – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/रुकुम घटनामा भेरी नदीमा हराइरहेकामध्ये एक युवाको शव चार दिनपछि नदीमा तैरिएको अवस्थामा फेला पारे
काठमाडौं- पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोतीमा प्रेमिका लिन पुगेको समूहमाथि गाउँलेले गरेको आ’क्रमणपछि भेरी नदिमा हा’म फा’लेर बे’पत्ता भएकामध्ये थप एक युवाको शव बुधबार फेला परेको छ।
घटनाको चार दिनपछि थप एक युवाको शव फेला परेको हो। अझै दुई जना बेपत्ता छन्। शसस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोलीले ती युवकको शव फेला पारेको हो। गोताखोरले बुधबारदेखि बे’पत्ताको खोजी सुरु गरेको थियो।
भेरी नगरपालिकाका लोकेन्द्र सुनारको शव कुदु भन्ने नदीमा तैरिएको अवस्थामा गोताखोरले फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ ।
यसअघि जाजरकोटकै भेरी नगरपालिका–४, का २१ वर्षीय नवराज विक, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–१, का २० वर्षीय टीकाराम नेपालीको शव भेरी नदीमै गत आइतबार भेटिएको थियो भने सोमबार भेरी नगरपालिका–४, जाजरकोटका १९ वर्षीय गणेश बुढा मगरको शव भेटिएको थियो । उक्त घटनामा अरु २ जना अझै बेपत्ता छन् । भेरी नगरपालिका–४, जाजरकोटका सञ्जु विक र ११ नम्वर वडाका १७ वर्षीय गोविन्द शाही बेपत्ता छन् ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ८ सोती गाउँका स्थानीयले लखेटेपछि ज्या’न जोगाउन भेरी नदीमा हा’म फालेकामध्ये सोमबार बेलुकी जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका वडा नं. ४ का का १७ वर्षीय गणेश बुढा मगरको शव फेला परेको थियो।
घटना भएकै दिन शनिबार राति १० बजेतिर केटी लिन भनेर सोती गाउँ पुगेका सोही ठाउँका २१ वर्षीय नवराज विकको र रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. १ का २० वर्षीय टीकाराम सुनारको शव आइतबार बिहान सानी भेरी नदी किनारमा फेला परेको थियो।
गत शनिबार बेलुका ५ बजेतिर मल्ल थरकी केटीलाई भगाएर ल्याउने भन्दै मृतक नवराज विकले थप १८ जना साथी लगेर रुकुमपश्चिमको चौरजहारी पुगेको समयमा घटना भएको थियो।
रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीमा भएको घटनाका पीडित परिवारले २० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी गरेका छन् । अन्तरजातीय सम्बन्धलाई लिएर जेठ १० गते भएको घटनाका पीडित परिवारले किटानी जाहेरी गरेका हुन् । पीडितले दिएको जोहेरीका आधारमा १२ जनालाई पक्राउ गरिएको र बाँकी ८ जनाको खोजी भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक ठगबहादुर केसीले बताए ।
उनका अनुसार वडाध्यक्ष डम्मरबहादुर मल्ल, डिल्ली मल्ल, वीरबहादुर मल्ल, प्रकाशी मल्ल, सन्तोष मल्ल, मोहन पुन मगर, रमेशबहादुर मल्ल, मानबहादुर मल्ल, टोपबहादुर मल्ललाई पक्राउ गरिएको छ । त्यस्तै तुलबहादुर मल्ल, प्रेमबहादुर ठकुरी र १७ वर्षीया एक किशोरीलाई पक्राउ गरिएको छ । पक्राउ परेका सबैलाई १० दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक केसीको भनाइ छ ।
जेठ १० गते शनिबार साँझ सोती पुगेका १८ युवाको समूहलाई गाउँलेले लखेट्दा तीन जनाको निधन भएको थियो भने तीन जना अझै बेपत्ता छन् । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ का नवराज विक, गणेश बुढा मगर र चौरजहारी नगरपालिका–१ का टीकाराम नेपालीको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो । घटनमा भेरी नगरपालिका–११ का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र वडा नं ४ का सञ्जु विक बेपत्ता छन् ।
बेपत्ता तीनै जनाको खोजीका लागि गोताखोर टोली परिचालन गरिएको छ । खोजीमा सशस्त्र प्रहरीका तीन गोताखोर र सहयोगीसहित सात जनाको टोलीले भेरी नदीमा खोजी गरिरहेको प्रहरीले बताएको छ । पीडित पक्षले भने जाजरकोट प्रहरीमा उजुरी दिएका हुन् ।
क्वा,रेन्टा,इनमा खाना खाएर ए,क्कासी छाती दु,ख्यो भनेर ढ,लेका व्यक्तिको मृ,त्यु
प्रधानमन्त्री ओलिले गरे अर्को राम्रो निर्णय : सीमामा सेना खटाउने तयारी
खु:सी को खबर : एक लाख गोर्खा सैनिक आफ्नो देशको भुमि सुरक्ष गर्न फिर्ता आउदै |